> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Pictures ka Photo Booth
Sidee ayaan u soo kaban karto, tirtiray Pictures ka Photo Booth?
Waxaan ula kac ahayn tirtiray sawirada aan ka Photo Booth. Waxaan hubiyaa in aan Finder oo Photo Booth album laakiin waxaan helay sawiro lahayn. Waxay madhan ku jiray oo dhan. Waxaan eegay qashinka iyo sawir lahayn gudaha ahaa mid aad. Baryayaaye, ii sheeg sidee baan u soo ceshano karaa !!!!
Ulakac u tirtira ama shil ah ee sawirada Photo Booth noqon kartaa waayo-aragnimo daran, gaar ahaan marka sawirada yihiin qiimo leh oo aad aan xitaa iyaga ka arki kartaa in aad qashinka Mac. Waa maxay markaas xalka ugu wanaagsan? Sida caadiga ah waxaad noqon doontaa in la soo celiyo sawirada tirtiray ka album Photo Booth ama ka Trash awoodaan. Laakiin haddii laba xal waxtar, codsi dhinac saddexaad Mac Photo Booth kabashada sawir kaa caawin doonaa wax badan inuu ka soo kabsado sawirada tirtiray ka Photo Booth.
Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij sida u saamaxaya in aad ka bogsato sawiro ka Photo Booth hab amaan ah oo si sahlan loo isticmaalo. Its user-friendly interface jirsado horumarka kabashada xogta adag galay qaar ka mid ah qasabno fudud. No arrin aad sawiro Photo Booth ayaa laga badiyay ay sabab u tahay tirtirka, formatting, musuq-maasuq ama hab qalad, waxaad mar walba isticmaali kartaa barnaamijka inuu dib u soo ceshano.
Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version maxkamad codsiga ah. Version maxkamad Tani waxay awood aad si baarista xijaab iyo ku eegaan ka heleen sawiro Photo Booth intaadan gadan nooca buuxda u soo kabashada.
Qabtaan Photo Booth Recovery u Mac 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Daahfurka Wondershare Data Recovery for Mac dooro hab kabashada ah si ay u bilaabaan dib u soo kabashada
Sida image hoose, aad arki doonaa fursadaha kabashada qaar ka mid ah tilmaamaha faahfaahsan ee interface bilowga.
Dooro "lumay Recovery File" mode inuu ku soo bilowdo, hab ay tani tahay doorashada u fiican in aad ka bogsato sawirada tirtiray ka Photo Booth ku Mac.
Fiiro gaar ah: Ha bilowno barnaamij ku saabsan Risaalo ka mid ah oo aad Photo Booth oo Photo Booth album.
Tallaabada 2 Scan Barzakh aad Photo Booth oo Photo Booth album si ay u eegaan sawirada tirtiray.
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan xijaab / mugga midig oo guji "Scan" ay soo baadhaan. Waxaad dooran kartaa "image" marka gujinaya "Nooca File Dooro" furmo.
Fiiro gaar ah: Haddii aad sawiro Photo Booth ayaa laga badiyay ay sabab u tahay formatting, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawiro ka Photo Booth
Dhamaan sawirada helo waa la tusay doonaa fayl ka dib markii iskaanka. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan folder album Photo Booth iyo fayl kale inay u ku eegaan iyo hubi in aad images lumay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Ka dib markii xulashada sawiro aad u socotid inuu ka soo kabsado, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhufo "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo sawirrada kabsaday dib si aad u album Photo Booth inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.
Top 20 macruufka 9 qalabka kaabta for Windows iyo Mac OS
Xiriirada Undelete ka Android Phones
MKV Recovery: Ladnaansho masaxay ama lumay MKV Videos fudayd